Ny Citizenship amin'ny alàlan'ny Board Investment dia handinika fangatahana zom-pirenena ary ny valiny dia mety hanome, handà na hanemotra ny antony, fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
Ny salan'isan'ny fanodinana manomboka amin'ny fahazoana fangatahana ka hatramin'ny fampandrenesana ny valiny dia telo (3) volana. Raha misy tranga manokana, antenaina fa haharitra telo (3) volana ny fotoana fanodinana, dia ampandrenesina ny tompon'andraikitra nahazo alalana ny amin'ny fahatarana taraiky.
Ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola dia tsy maintsy apetraka amin'ny endrika elektronika sy vita pirinty avy amin'ny maso ivoho alalana amin'ny anaran'ny mpangataka.
Ny antontan-taratasy rehetra natolotra niaraka tamin'ny fangatahana dia tokony ho amin'ny fiteny Anglisy na fandikanteny voamarina ao amin'ny English English.
NB: Ny dikanteny voamarina dia midika fandikan-teny ampiasain'ny mpandika teny matihanina izay ekena amin'ny fomba ofisialy amin'ny fitsarana, sampan-draharaham-panjakana, fikambanana iraisam-pirenena na andrim-panjakana mitovy amin'izany, na raha tanterahina any amin'ny firenena izay tsy misy mpandika teny ofisialy ofisialy, dikanteny iray vokarin'ny orinasa iray izay manana anjara asa na orinasa misy vokany amin'ny fandikan-teny matihanina.
Ny antontan-taratasy fanohanan-kevitra REHETRA dia tsy maintsy apetaka amin'ireo rindranasa alohan'ny hametrahan'ny Unit azy azy.
Ny fangatahana rehetra dia tsy maintsy miaraka amin'ny fanodinana takiana tsy azo averina ary ny sarany amin'ny fahazotoana ho an'ny mpangataka lehibe, ny vadiny sy ny tsirairay miankina aminy.
Raha nomena ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola, ny Unit dia hampandre ny maso ivoho nahazo alàlana fa ny vola ilaina amin'ny fampiasam-bola sy ny saram-pitantanan'ny governemanta dia tsy maintsy aloa alohan'ny fanomezana ny taratasy fanamarinana ny zom-pirenena.
Raha toa ka nolavina ny fangatahana iray, ny mpangataka dia afaka mangataka fanamarihana avy amin'ny Minisitra.